मरेकाे मान्छेसँग कुरा गर्ने सिनेमा - लोकसंवाद
आश्विन १३, २०७७, मंगलबार
मरेकाे मान्छेसँग कुरा गर्ने सिनेमा
‘दि सिक्थ सेन्स’लाई एउटा उत्कृष्ट साइकोलजिकल थ्रिलर फिल्मका रुपमा गणना गरिन्छ । यस सिनेमालाई भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक स्यामनले निर्देशन गरेका थिए । यस सिनेमाका लेखक पनि स्यामन नै हुन् उनलाई यस सिनेमाले नयाँ स्पिलबर्गको रुपमा चित्रित गरेको थियो । करिव ४० मिलियन डलरमा निर्माण भएको यस सिनेमाले झण्डै ६७३ मिलियन डलर बराबरको कमाई गरेको थियो । नायक ब्रुश ऊलिसको अभिनयको यो एउटा उत्कृष्ट सिनेमा पनि हो ।
सिनेमाको पृष्ठभूमि डा. म्याकोलम क्रोबेको वरिपरि घुमेको छ । डा. म्याकोलम फिलाडेल्फिया शहरको प्रख्यात मनोविज्ञ हुन्छन् । शहरका मेयरले पनि उनको योगदानको कदर गर्दै उनलाई नागरिक सम्मान प्रदान गरेका हुन्छन् । डा. म्याकोलम र उनको श्रीमती घरमा हुँदा भिसेन्ट नामक एउटा मानसिक रोगी उनको घरमा आउँछ । उसले डा. म्याकोलमले आफूलाई ठिक गर्न नसकेको भनी उनलाई गोली हान्छ र आफू पनि टाउकोमा गोली हानी आत्महत्या गर्छ ।
सिनेमामा उनलाई जीवीत देखाइन्छ । यो नै यस सिनेमाको रहस्य हो । डा.म्याकोलमलाइ आफ्नो एकजना रोगीको उपचार गर्न नसकेकोमा निकै ग्लानि थियो । र यसको बोझ कम गर्न उनी अन्य विरामीलार्ई धेरै स्नेह र सावधानीपूर्वक उपचार गर्ने गर्दथे । यसै क्रममा कोल नामक नौ वर्षीय बच्चा उनको पेसेन्ट बनी आउँछ ।
कोल अद्भूत क्षमतासम्पन्न बच्चा हुन्छ र ऊ एन्जाइटी डिसअर्डर रोगबाट ग्रसित हुन्छ । यस समस्याले गर्दा कोल कुनै पनि काम ठिकसँग गर्न सक्दैन् । कोलसँग एउटा विशेष क्षमता हुन्छ, ऊसँग मरेका मान्छेलाई देख्नसक्ने र कुरा गर्नसक्ने विचित्रको क्षमता हुन्छ ।
वास्तविक रुपमा डा. म्याकोलम गोली लागेर मरिसकेको हुन्छन् । तर कोलले मरेका मान्छे देख्ने क्षमताले गर्दा डा. म्याकोलमसँग ऊ कुरा गरिराखेको हुन्छ । फिल्मको प्रारम्भमा डा. म्याकोलमले बच्चा कोललाई मरेका मान्छेलाई देखेर नडराउने काउन्सिलिङ्ग दिएका हुन्छन् । विस्तारै कोल पनि मरेका मान्छेसँग नडराई सहयोग गर्न थाल्छ ।
फिल्ममा बच्चा कोलको भेट मरिसकेकी एकजना केटी कायरासँग हुन्छ । मरिसकेकी कायराले कोललाई एउटा भिडियो टेप दिन्छिन् । त्यस भिडियो टेपमा कायरालाई उसको आमाले विष दिएर मारेको देखाइएको हुन्छ । वास्तवमा कायराको आमा पनि मुनचेसन सिन्ड्रोम वाई प्रोक्सी भन्ने मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुन्छिन् । यस रोगबाट ग्रस्त मानिस सबैबाट सहानुभूति पाउने अपेक्षा राख्छन् । र यस्तो सहानुभूती पाउन रोगीले जस्तो काम पनि गर्छन् । कायराकी आमाले छोरी मरेको सहानुभूति पाउन कायरालाई स्लो प्वाइजन दिएर हत्या गरेकी हुन्छिन् ।
मृतक कायराले बच्चा कोलको सहायताले आफ्नो हत्या मानसिक रोगी आमाले गरेको रहस्य खोलिदिन्छिन् ।
फिल्ममा देखाइन्छ वास्तवमा डा. म्याकोलम मरीसकेका हुन्छन् । तर बच्चा कोल उनलाई देख्न सक्छ । उसका लागि डा. म्याकोलम अझै उसको उपचार र हेरचाह गरिरहेका हुनछन् । फिल्मलाई रोचक बनाउन म्याकोलमलाई पनि जीवित पात्रझैं देखाइएको हुन्छ । दर्शकलाई डा. म्याकोलमको रहस्यबारे फिल्मको अन्तमा आएर थाहा हुन्छ कि डा. म्याकोलम त बच्चा कोलका लागिमात्र जीवित छन् ।
फिल्मको अन्तमा बच्चा कोलको मद्दतले डा. म्याकोलमले थाहा पाउँछन् वास्तवमा उनी जिउँदो होइनन् । उनी मरिसकेका छन् । उनी बच्चा कोलको मस्तिष्कको उपज मात्रै हुन् । फिल्मले यस विषयबारे धेरै कुरामा रहस्य यथावत राखेको छ । फिल्मले सिनेप्रेमीलाई पर्याप्त मनोरंजन दिन्छ ।
कृतिम बौद्धिकताको संसारः म्याट्रिक्स फिल्मबारे एक चर्चा
सपना भित्रको सपना फिल्म इन्सेप्सनको कल्पना
रोबोट र मनुष्यको द्वन्द्व विषयक उत्कृष्ट फिल्म: एआई
ल बुझ्नुस सटर आइल्याण्ड फिल्मको सस्पेन्स
समिक्षा अधिकारी र सुदिप कुँवरको 'मायालु जहिले रिसाउना' म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सञ्चारकर्मी बरालको ‘नरिसाउन होइ’ सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
नयाँ कमेडी सिरियल 'अड्डा' कमेडी प्लस टेलिभिजनमा : हरेक मङ्गलवार बेलुकी ९ बजे प्रसारण हुने
सलिल सुन्दर तुलाधरको नेपाल भाषाको ‘यः मां’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
ज्ञानलाई अनुभवमा नल्याएसम्म आफ्नो भन्न पाइँदैन, त्यो गुरु होइन, गुरुघण्टाल हो
डा. कपिलदेव उपाध्याय : ठक्कर, हण्डर र मेहनतले मनोचिकित्साको क्षेत्रमा स्थापित नाम
भेन्ट्रिकलमा रगत फर्कन नदिने रोग अर्थात् एवर्टिक रिगर्जिटेसन : पहिचानदेखि उपचारसम्म
अद्यावधिक र अन्यौलताको कसीमा स्थानीय तहका पार्श्वचित्र : उदासीनतालाई कसरी उत्साहमा बदल्ने ?
डा गोविन्द केसीका मागको विषयमा तत्काल वार्ताबाट समाधान खोज्न अपिल